Chess 🥇 Midira ary milalao Chess amin'ny Emulator. Online
Chess: Ahoana no filalaovana tsikelikely 🙂
Milalao Chess amin'ny Internet maimaim-poana, araho torolàlana isan-tsokosoko ireo:
Dingana 1. Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana amin'ny tranokalan'ny lalao Emulator.online.
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao.
Dingana 3. Ny sehatra dia mamela anao hisafidy amin'ny milalao robot na milalao mifanohitra amin'ny olona hafa izay miaraka aminao. Afaka "Manampy na esory ny feo", safidio ny"Haavo ny lalao”Ataovy ao amin'ny"efijery feno"ary vonona !.
Dingana 4. Ny iraka ataonao dia ny handao ny mpanjaka tsy misy hetsika azo atao, mahatadidy ny fitsipiky ny lalao hatrany. ny
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao dia kitiho ny toe-javatra hilalaovana indray.
Jereo koa ny Fitsipika ofisialin'ny Chess raha te hahalala ny fitsipika ofisialy iraisam-pirenena amin'ity lalao malaza ity.
Inona no atao hoe Chess?
Chess dia lalao board fialamboly sy fifaninanana ho an'ny mpilalao roa. Atao amin'ny tabilao toradroa izy io ary mizara 64 efamira, mifandimby mainty sy fotsy. Amin'ny lafiny iray dia misy ireo sanganasa fotsy 16 ary amin'ny lafiny iray dia mitovy isa mitovy amin'ny farango mainty.
Ny mpilalao tsirairay dia manan-jo hanao hetsika iray isaky ny mandeha. Ny tanjon'ny lalao dia ny manamarina ny mpanohitra.
Lalao ilana izany fanjohian-kevitra sy paikady lojika, tsy misy idiran'ny vintana, afa-tsy ny sary amin'ny loko eo am-piandohan'ny lalao.
Ny tabilao fanaovana «chess» dia manana Efamira 64 zaraina amin'ny tsanganana 8 (Mitsangana) ary 8 andalana (marindrano), samy manana efamira 8. Maizina sy maivana ireo trano. Ny kianja voalohany amin'ny ankavanan'ny birao dia tokony ho kianja mainty ary ny kianja farany eo amin'ny ankavanana kianja fotsy.
Ny tsanganana tsirairay dia tendren'ny taratasy avy any A hatramin'ny H, raha ny laharana kosa dia voatondro miaraka amina isa avy amin'ny 1 ao amin'ny 8 . Amin'izany fomba izany, ny kianja tsirairay dia tendrena miaraka amin'ny litera sy isa mifanaraka amin'ny tsanganana sy ny laharany (a1, b6, f5, sns). Ity no rafitra fanasokajiana mahazatra amin'ny fifaninanana ofisialys.
Ny mpilalao tsirairay dia manana Fizarana 16, mizara hazavana sy maizina koa. Ireo sombin-javatra ireo dia mifanaraka amin'ny sandany:
Fanamarihana: Ny mpilalao chess sasany dia tsy mihevitra ny pawn ho toy ny sombintsombiny. Ny sanda sombin-javatra koa dia mety miovaova, anisan'izany ny miankina amin'ny toeran'ny sombin-javatra eo amin'ny solaitrabe.
Amin'ny fiantombohan'ny lalao dia zaraina eo amin'ny solaitrabe ireto singa ireto toy izao: apetraka amin'ny laharana 1 ireo sangan'isa fotsy, arovan'ny laharana pion amin'ny laharana 2, raha ny laharana mainty kosa dia eo amin'ny laharana faha-8 ary ny kitapo misy azy amin'ny 7. Jereo eto ambany:
Matetika ireo vao manomboka dia manakorontana ny toeran'ny Mpanjaka sy ny Mpanjakavavy, fa mba hanamorana azy, tadidio fotsiny izany ny mpanjakavavy dia manomboka hatrany ny lalao amin'ny alàlan'ny fibodoana ny kianja mitovy loko (White Queen in the White House, Black Queen in the Black House).
Noho izany, ny mpanjakavavy fotsy dia mitana ny kianja D1, raha ny mpanjakavavy mainty no mitazona ny kianja D8. Ity fampifanarahana ity dia ampiasaina mba hisorohana ny fanafihan'ny Mpanjaka eo am-piandohana, toy izany koa raha toa ka eo amin'ny tsanganana iray ihany ny mpanjakavavy mpanohitra.
Mizara roa ny elatra:
Elatry ny mpanjakavavy
Elatry ny mpanjaka
Ny elany dia nomena anarana araka ny elany. Miditra ireo tilikambo a1 y a8, ohatra, nantsoina izy ireo Tower-Lady, raha miditra ny tilikambo h1 sy h8, Torre-Rei. Toy izany koa no mitranga amin'ireo sombin-javatra hafa, ary na dia amin'ireo tongony aza, izay antsoina amin'ny anarana hoe sombin-tany arovany. Ny gadra ao e2 dia ny mpanjaka gadona, ny gadona in d2, ny mpanjakavavin'ny pion, ny pion in f2 dia antsoina hoe mpanjakan'ny episkôla sy ny pion ao c2, mpanjakavavin'ny pawn-eveka, sns.
Chess dia lalao tranainy iray izay, nandritra ny taona rehetra nahavelomany, misy tantara samihafa mifandraika amin'ny niandohany.
Origins of Chess in India
Ny tantara voalohany notantaraina eran'izao tontolo izao dia nitranga tao amin'ny India. Nisy tanàna kely antsoina hoe Taligana, ary ilay hany zanaky ny mahery Rajah maty tamin'ny ady ra.
Nanjary kivy i Rajah ary tsy afa-manoatra intsony ny famoizana ny zanany lahy. Ny olana lehibe dia tsy hoe maty tsikelikely fotsiny i rajah, fa nanao tsirambina ny fanjakany koa. Fotoana vitsy monja dia nianjera tanteraka ilay fanjakana.
Mahita ny fianjeran'ny fanjakana, brahmin iray antsoina hoe Lahur Sessa, indray andro dia nankany amin'ny mpanjaka ary nanolotra azy ny takelaka misy efamira 64, mainty sy fotsy, ankoatry ny sombin-javatra marobe izay mampiseho ny tafiky ny tafiny, ny miaramila an-tongotra, ny mpitaingin-tsoavaly, ny fiara mifono vy, ny mpamily elefanta, ny vizier lehibe ary i Rajah tenany.
Nilaza tamin'ny rajah ny pretra fa ny lalao toy izany dia afaka mampitony ny fanahiny ary azo antoka fa hanasitrana ny fahaketrahana io.. Raha ny marina, na inona na inona nolazain'ny Brahman dia nitranga dia nanjaka tamin'ny fanjakany indray i Rajah, nanala ny krizy tsy ho eo amin'ny lalany.
Tsy hay hazavaina ny fomba nitrangan'ny zava-drehetra, miaraka amin'ny birao tokana misy sombin-javatra tompon'andraikitra amin'ny famongorana ny alahelon'ny rajah. Ho valisoa dia nomena fotoana ny brahmin hangataka izay tadiaviny. Tamin'ny voalohany dia nolaviny ny tolotra toy izany, satria nihevitra izy fa tsy mendrika izany tolotra izany izy, saingy noho ny fikirizan'ny Rajah, dia nanao fangatahana tsotra izy.
Nangataka varimbazaha fotsiny ny brahmin ho an'ny kianja voalohany eo amin'ny solaitrabe, roa ho an'ny faharoa, efatra ho an'ny fahatelo, valo ho an'ny fahefatra ary toy izany hatrany hatramin'ny farany. Nahafaly ny rajah ilay naivete fangatahana.
Na izany aza, ny fangatahana tamim-panetren-tena nataon'ny Brahmin dia tsy fanetren-tena loatra. Rehefa avy nanao kajy isan-karazany ny vidin'ny varimbazaha homena azy izy ireo, dia hitan'izy ireo fa maharitra roa arivo taona ny fijinjana ny fanjakana mba hanatanterahana ny fangatahan'ny pretra.
Nampiaiky volana azy ny sain'i brahmin, dia nanasa azy ho lohan'ny mpitsara (karazana minisitra, mpanolotsaina ny rajah) amin'ny fanjakana izy, ary navelan'i Sessa ny trosany be tamin'ny varimbazaha.
Raha ny marina, izay natolotry ny brahmin ny rajah dia tsy lalao filalaovana chess, izany chaturanga, iray amin'ireo mpifaninana lehibe amin'ny lalao maherin'ny chess.
Fiandohana ao amin'ny Mythology
Fahafahana lehibe iray hafa izay mipoitra amin'ny tantara maro samihafa momba ny niandohan'ny chess dia ARES, Andriamanitry ny ady, dia ho namorona birao hitsapana ny paikadiny ady (izay tena voafetra, satria tsy fantatra fa nanana tetika tamin'ny ady nataony i Ares, dia mahery setra fotsiny izy, nanafika tsy nisy marimaritra iraisana matetika).
Saingy, ny solaitrabe tsirairay dia naneho ny ampahany amin'ny tafiny, ary dia toy izany, mandra-panan'i Ares zanaka lahy maty, ary nampita ny fototr'ilay lalao taminy. Aorian'izay, ny lalao dia mety hahatratra ny fahalalan'ny olona mety maty.
Fivoaran'ny chess eo amin'ny tantara
Fantatra izany eo anelanelan'ny 1450 ka hatramin'ny 1850, ny chess dia nanomboka nanana fiovana hita maso mifandraika amin'ny zavatra fantatsika ankehitriny. Nandritra io vanim-potoana io no nahazoan'ireo sombin-javatra isan-karazany izay fantatsika ankehitriny, mazava ho azy, ireo fihetsika sy sombin-javatra rehetra naterak'i Chaturanga ireo.
Ny elefanta (ny eveka maoderina teo alohany) dia tsy afaka nihetsika afa-tsy tamin'ny diagonaly roa. Ilay mpitsara (ny teo alohan'ilay mpanjakavavy) dia trano amin'ny diagonal ihany. Ireo mpandeha an-tongotra tsy afaka nifindra kianja roa izy ireo tamin'ny hetsika voalohany ary mbola tsy nisy ny castling. Pawns izy ireo ihany no azo natsangana ho vizier, izay singa malemy indrindra, taorian'ny gadra, noho ny fivezivezeny voafetra.
Ny fitsipiky ny chess fantatsika anio dia nanomboka namboarina 1475, tsy azonao antoka fotsiny hoe taiza no nanombohan'io. Tsy mitovy ny mpahay tantara sasany Espana sy Italia.
Nandritra io vanim-potoana io no nahazoan'ny mpandeha an-tongotra fivezivezena fantatsika ankehitriny, izay misy ny efamira roa mifindra amin'ny hetsika voalohany ary ny fakana mpandeha an-tongotra hafa avy nitranga .
Amin'izany fotoana izany, ny hetsika vaovao an'ny eveka sy mpanjakavavy voafaritra ihany koa izy ireo ary, ny tena zava-dehibe, ny mpanjakavavy no nanjary sombin-javatra lehibe indrindra amin'ny lalao, izy irery no afaka mandroso na aiza na aiza ary mandroso na mihemotra efamira maro araka izay itiavany azy.
Ny fihetsiky ny sombin-javatra hafa, miaraka amin'ireo lalàna sisa tavela amin'ny chess rehetra, dia novaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny tapaky ny taonjato. XIX, ary mbola mijanona ireo fitsipika ireo mandraka androany.
Ho an'ireo izay milalao chess ho fialamboly, na ho an'ireo lahika amin'ny fanatanjahantena, lalao chess hatrany no lalaovina eo anelanelan'ny mpilalao roa amin'ny solaitra iray.
Na izany aza, amin'ity fanatanjahan-tena ity dia tsy matetika no atao toy izany ny lalao, ary misy maoderina betsaka noho izay azonao eritreretina raha vao jerena. Manomboka amin'ny faharetan'ny lalao, izay mety miovaova minitra vitsy ka hatramin'ny ora na andro maromaro mihitsy aza mba hanambarana azy io, indraindray nefa tsy misy mpilalao maty.
Ny lalao lalaovin'ireo matihanina dia saika mampiasa famantaranandro izay mifehy ny fotoanan'ny mpilalao tsirairay avy. Amin'ny tranga sasany, ny mpilalao dia afaka milalao mpanohitra mihoatra ny iray amin'ny tabilao samihafa. Ny latabatra dia tsy toradroa foana ary misy ny caturities modalities izay manana hatramin'ny 36. Afaka milalao chess ianao nefa tsy mahita ny solaitrabe!
Ho hitantsika izao ny fomba samy hafa fanaovana catur ary ireo fahafaha-manao maro ahafahana manao ity lalao ity ho mahaliana kokoa sy sarotra kokoa.
Lalao kilalao chess ao an-dakilasy
Izany no maody catur nentim-paharazana, izay ifanatrehan'ireo mpilalao mifanatrika manoloana ny solaitrabe.
Io no maodely ampiasain'ny mpilalao solosaina mifandray amin'ny Internet na amin'ny tamba-jotra eo an-toerana, manaraka ny fitsipika mitovy amin'ny chess nentim-paharazana.
Izy io dia fiovan'ny chess nentim-paharazana izay misy a 15 minitra fetr'andro farany ambony ho an'ny mpilalao tsirairay. Amin'ity fomba ity dia tsy mila manoratra ny tolo-kevitr'izy ireo ny mpilalao matihanina.
Lalao Chess miaraka
Amin'ny lalao chess miaraka. ny mpilalao chess dia milalao mpanohitra mihoatra ny iray amin'ny solaitra samihafa.
Amin'ity maody ity dia tsy manao mpilalao izany jereo ny solaitrabeNa amin'ny fampiasana vending na amin'ny efitrano misaraka. Ny lalao jamba Miorina amin'ny fahatsiarovan'ny mpilalao chess io, izay tsy maintsy manaingo ny toeran'ny tabilao ary manao ny fandinihany ara-tsaina.
El chess paositra na taratasy, araka ny fantatra ihany koa, dia a lalao maody amin'ny lalao chess avy lavitra, tamin'ny alàlan'ny fifanoratana. Tamin'ny voalohany dia nandefa ny tolotr'izy ireo tamin'ny alàlan'ny taratasy na karatra paositry ny mpilalao chess, saingy miaraka amin'ny fotoana sy fandrosoana amin'ny teknolojia, amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mampiasa e-mail, mampihena be ny fotoana fiandrasana valiny.
Ny fanamarihana an'ity maody ity dia tsy mitovy amin'ireo fanamarihana catur nentim-paharazana, indrindra satria fanaon'ny olona manerana an'izao tontolo izao, mpandahateny amin'ny fiteny maro. Ny chess epistolary dia manana ny azy manokana federasiona iraisam-pirenena(ICCF).
Fitsipika ofisialy amin'ny lalao catur
Fitsipika fototry ny lalao
1. Tanjon'ny lalao chess.
1.1 Ny lalao chess dia lalaovina amin'ny mpanohitra roa izay mifandimby manetsiketsika sombin-kazo eo amin'ny solaitrabe antsoina hoe 'board chess'. izy mpilalao miaraka amin'ny sombin-fotsy dia manomboka ny lalao. Ny mpilalao iray dia voalaza fa 'manana anjara hilalao' rehefa vita ny fihetsiky ny mpanohitra azy. (Jereo ny Andininy 6.7)
1.2 Ny tanjon'ny mpilalao tsirairay dia fametrahana ny mpanjaka mpanohitra 'eo ambanin'ny fanafihana' amin'ny fomba tsy ahafahan'ny mpifanandrina mihetsika ara-dalàna. Ny mpilalao mahatratra an'io tanjona io dia voalaza fa mamono ny mpanjaka mpanohitra ary mandresy amin'ny lalao. Tsy avela handao na hametraka hanafika ny mpanjakanao, na hisambotra ny mpanjaka mpanohitra anao. Ny mpanohitra izay ny mpanjaka no mpiara-miasa aminy resy tamin'ny lalao.
1.3 Ny lalao dia tie raha toa ka miteraka toerana izay na ny mpilalao tsy manana fotoana ahafahana mijery namana.
2. Ny toerana voalohany an'ireo sombin-javatra eny amin'ny solaitrabe.
2.1 Ny tabilao chess dia misy tambajotran'ny 8 × 8 misy 64 toradroa mifandimby hazavana mitovy (efamira 'fotsy hoditra') ary maizina (ny kianja'mainty').
Ny tabilao dia apetraka eo anelanelan'ny mpilalao amin'ny fomba iray toy izany ny efajoro eo amin'ny zorony ankavanan'ny mpilalao tsirairay ho fotsy.
2.2 Eo am-piandohan'ny lalao dia misy sekely miloko maivana 16 (mpilalao "fotsy") ny mpilalao iray; ny iray kosa manana sombina miloko maizina 16 (ireo faritra mainty “):
Ireto faritra ireto dia toy izao:
Mpanjaka fotsy, matetika asehon'ilay marika.
Ramatoa fotsy, asehon'ny sary.
Tilikambo fotsy roa, asehon'ny sary.
Eveka fotsy roa, asehon'ny sary.
Soavaly fotsy roa, asehon'ny sary.
Paoma fotsy valo, asehon'ny sary.
Mpanjaka mainty, asehon'ny sary.
Ramatoa mainty, asehon'ny sary.
Eveka mainty roa, asehon'ny sary.
Soavaly mainty roa, asehon'ny sary.
2.3 Ny toerana voalohany an'ireo sombin-javatra eny amin'ny solaitrabe dia ireto manaraka ireto:
2.4 Ireo trano valo namboarina mitsangana dia antsoina hoe 'tsanganana'. Ireo trano valo nalamina marindrano dia nantsoina hoe 'laharana'. Ny tsipika mahitsy amin'ny efamira mitovy loko aminy, mifindra amin'ny faran'ny tabilao mankany amin'ny mifanila aminy dia antsoina hoe 'diagonal'.
3. Fihetsiketsehan'ny sombintsombiny.
3.1 Tsy azo atao ny mamindra sombina amin'ny kianja efa nohazonin'ny sombin-javatra iray hafa mitovy loko. Raha mifindra any amin'ny kianja efa nipetrahan'ny sombin'ny mpanohitra ny sombin-javatra iray, ity farany dia voasambotra ary nesorina tao amin'ny solaitrabe ho ampahany amin'ilay fihetsika iray ihany. Ny sombin-javatra iray dia voalaza fa manafika ny sombin'ny mpanohitra raha toa ka afaka misambotra an'io kianja io, mifanaraka amin'ny andininy 3.2 ka
Ny sombin-tany iray dia heverina fa manafika kianja iray, na dia voasoroka aza tsy hifindra amin'ity kianja ity io kianja io, satria hamela na hanafika ny mpanjakany manokana.
3.2 Afaka mifindra amin'ny kianja rehetra amin'ny diagonal ny eveka.
3.3 Ny eveka dia afaka mifindra amin'ny kianja rehetra amin'ny fisie na ny laharana misy azy.
3.4 Ny mpanjakavavy dia afaka mifindra amin'ny kianja rehetra amin'ny fisie, laharana, na diagonal misy azy.
3.5 Rehefa manao ireo fihetsika ireo dia tsy afaka mitsambikina mihoatra ny sombin-javatra rehetra eo amin'ny lalan'izy ireo ny eveka, rook na mpanjakavavy.
3.6 Ny soavaly dia afaka mifindra amin'ny iray amin'ireo kianja akaikin'ny iray onenanany. Mariho fa ny kianja izay azon'ny Knight tazonina dia tsy eo amin'ny tsanganana, laharana, na diagonal ihany.
3.7 ny. Ny pawn dia azo afindra amin'ny kianja iray, eo alohany avy hatrany, amin'ny rakitra iray ihany, izay tsy zahana, na
3.7.1 Amin'ny hetsika voalohany, ny pawn dia azo afindra araka ny voalaza ao amin'ny 3.7.a; Ary raha tsy izany, afaka mifindra trano roa ianao, raha tsy samy misy olona na
3.7.2 Ny pawn dia mety mifindra amin'ny kianja iray fonenan'ny sangan'ny mpanohitra, izay eo anoloana an'io eo amin'ny diagonaly, ao anaty fisie mifanila aminy, izay maka ilay sombin-javatra.
3.7.3 Kitapo manafika kianja niampitan'ny tananan'ny mpanohitra izay vao nandroso efa-joro roa tamina hetsika tokana avy teo amin'ny kianja niorenany dia afaka misambotra an'ity kiady mifanohitra ity toa ny hoe nifindra kianja iray monja izy.
Ity fisamborana ity dia tsy azo atao aorian'ny famindra eo noho eo aorian'ny fahombiazana voalaza etsy ambony ary antsoina hoe socket 'en passant'.
3.7.4. Rehefa tonga amin'ny laharana lavitra indrindra amin'ny gadona misy azy ny pawn dia tsy maintsy atakalo ho isan'ny fihetsika mitovy amin'ny kianja iray ihany izy ho an'ny mpanjakavavy, rook, eveka, na soavaly mitovy loko aminy. Ny safidin'ny mpilalao dia tsy voafetra amin'ireo sombiny efa voasambotra tamin'ny lalao.
Ity fifanakalozana gadona ho an'ny sombin-javatra hafa ity dia antsoina hoe 'fampiroboroboana' ary eo noho eo ny hetsika ilay sombin-javatra vaovao.
3.8 Misy fomba roa samy hafa hanetsehana ny mpanjaka: afindra amin'ny trano mifanila aminy ny mpanjaka izay tsy notafihin'ny iray na maromaro tamin'ireo mpifaninana taminy.
Mety ho vita ihany koa 'Swinging'. Ity dia hetsika natao tamin'ny mpanjaka ary iray amin'ireo rooks, mitovy loko miaraka amin'ny laharana voalohany an'ny mpilalao, heverina ho hetsika tokana mpanjaka ary novonoina toy izao manaraka izao: ny mpanjaka dia nafindra avy tany an-tranony tany am-boalohany ho trano roa manatrika ny tilikambo izay ao an-tranony tany am-boalohany, avy eo nafindra tany amin'ilay trano niampitan'ny mpanjaka ny tilikambo.
(1) Ny zo hamoaka:
raha efa nifindra ny mpanjaka, na
miaraka amina tilikambo efa nafindra
(2) Tsy avela vetivety ny Castling:
raha ny kianja ienenan'ny mpanjaka, na ny kianja tokony halehany, na ny kianja ho azony, dia notafihin'ny iray na mihoatra ny ampahan'ny mpanohitra, na
raha misy sombin-javatra eo anelanelan'ny mpanjaka sy ny rookà izay tokony havoakany.
3.9 Voalaza fa voafehy ny mpanjaka raha notafihin'ny iray na maromaro ny mpanohitra azy, na dia niraikitra aza ireo sombin-javatra ireo, izany hoe voasakana tsy hivoaka an'io trano io izy ireo, satria na hiala na hametraka ny fanjakan'izy ireo manokana.
Tsy misy sombin-javatra mihetsika amin'ny fomba aharihary na mamela ny mpanjakany hanana fifehezana.
4. Fihetsika mamindra ireo sombin-javatra.
4.1 Ny hetsika tsirairay dia tsy maintsy atao amin'ny tanana iray.
4.2 Raha mbola maneho ny fikasany mialoha izy (ohatra, milaza fa mahazo "j'adoube" na "manamboatra") aho, ny mpilalao izay manana ny anjarany hilalao dia afaka mahazo sombin-javatra iray na maromaro ao an-tranony.
4.3 Afa-tsy izay voalaza ao amin'ny Andininy 4.2, raha mikasika ilay mpilalao milalao
fanahy iniana iray na maromaro amin'ireo sombiny manokana eny amin'ny solaitrabe dia tsy maintsy milalao ilay sombin-javatra voalohany voakasik'izany azo afindra izy, na
iray na maromaro amin'ireo sombin'ny mpifanandrina aminy, dia tsy maintsy samboriny ilay sombin-javatra voalohany voakitika, izay azo nalaina, na
Ny sombin-doko tsirairay dia tsy maintsy alainy amin'ny sombiny ny mpanohitra na, raha tsy ara-dalàna izany dia afindrao na alao ilay sombin-javatra voalohany voakitika izay azo lalaovina na azo. Raha tsy mazava ny sombin-javatra nilalao teo aloha dia tokony heverina ho efa nilalao talohan'ny an'ny mpanohitra azy ny sombin'ilay mpilalao.
4.4 Raha mandray anjara ny mpilalao:
fanahy iniana kitiho ny mpanjakanao ary ny rook dia tsy maintsy manipy ity elatra ity raha toa ka ara-dalàna ny hetsika.
fanahy iniana nokasihina rook ary avy eo ny mpanjakany, tsy avela hilatsaka amin'ity elatra ity izy amin'ity hetsika ity ary tsy maintsy fehezin'ny andininy 4.3.a
Miaraka amin'ny fikasana ny handefa azy dia manohina ny mpanjaka na ny mpanjaka ary ny rookà iray miaraka aminy, saingy tsy ara-dalàna ny fandefasana an'ity lafiny ity, ny mpilalao dia tokony hanao hetsika ara-dalàna miaraka amin'ny mpanjakany (izay mety misy ny lapan'andriana). Raha tsy mihetsika ara-dalàna ny mpanjaka dia afaka manao hetsika ara-dalàna hafa ny mpilalao.
mampiroborobo kitapo, ny safidin'ny sombin-javatra dia vita farany raha tsy efa nikasika ny kianjan'ny fampiroboroboana ilay sombin-javatra.
Raha tsy misy azo afindra na voasambotra ireo sombin-javatra voakasik'izany dia afaka manao hetsika ara-dalàna ny mpilalao.
Rehefa mianjera amin'ny trano ny sombin-javatra, vokatry ny hetsika ara-dalàna na ampahany amin'ny hetsika ara-dalàna, dia tsy azo afindra amin'ny trano hafa izy io amin'ny fivezivezena io. Heverina ho vita ilay hetsika:
raha misy fisamborana, rehefa nesorina tao amin'ny solaitrabe ilay sombin-javatra ary ilay mpilalao, rehefa nametraka ny sombiny manokana teo amin'ny kianja vaovao, dia namoaka ilay sombin-kazo voasambotra teny am-pelatanany;
amin'ny raharaha castling, rehefa navotsotr'ilay mpilalao ny rook avy teny an-tànany teo amin'ny kianja niampitan'ny mpanjaka teo aloha. Rehefa navoakan'ny mpilalao teo am-pelatanany ny mpanjaka dia tsy ho ampiharina ilay hetsika, saingy tsy manan-jo hanao hetsika intsony ilay mpilalao ankoatry ny lapa eo amin'io elatra io, raha ara-dalàna izany;
raha ny momba ny fampiroboroboana ny pion, rehefa nesorina tsy ho eo amin'ny solaitrabe ny gadona ary navoakan'ny tanan'ny mpilalao ilay sangan'asa vaovao taorian'ny nametrahany azy teo amin'ny kianjan'ny fampiroboroboana. Raha efa namoaka ny gadona nahatratra ny boaty fampiroboroboana ny mpilalao dia mbola tsy vita ny hetsika, saingy tsy manan-jo hilalao intsony ilay mpilalao
mpandeha an-tongotra mankany amin'ny trano hafa.
Heverina ho ara-dalàna io fepetra io rehefa feno ny fepetra takiana ao amin'ny andininy 3. Raha tsy ara-dalàna ny hetsika dia tsy maintsy atao ny hetsika ara-dalàna hafa araka ny voalaza ao amin'ny Andininy 4.5
4.7 Very ny zon'ilay mpilalao mitaraina amin'ny fanitsakitsahana ny andininy 4 nataon'ny mpanohitra, hatramin'ny fotoana minia manohina sombin-javatra iray.
5. Faran'ny fiaingana
5.1 Ny lalao dia resin'ny mpilalao mifehy ny mpanjaka mpanohitra. Tapitra avy hatrany ity lalao ity, raha ara-dalàna ny hetsika izay mamokatra ny toeran'ny checkmate.
Raha toa ny mpandresy ka mandresy ny lalao dia miala ny azy. Tapitra avy hatrany ity lalao ity.
5.2 Voasarika ny lalao rehefa tsy mihetsika ara-dalàna ny mpilalao ary tsy voafehy ny mpanjakany. Ny lalao dia voalaza fa nifarana tamin'ny "rendrika" ny mpanjaka. Io dia mamarana avy hatrany ny lalao raha toa ka ara-dalàna ny hetsika namokatra ny toeran'ny fivarotana.
voasintona ny lalao rehefa misy toerana miseho izay tsy ahafahan'ny mpilalao manamarina ny mpanjakan'ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny hetsika ara-dalàna. Ny lalao dia voalaza fa nifarana tamin'ny "toerana maty". Ity dia mamarana avy hatrany ny lalao raha toa ka ara-dalàna ny hetsika mamoaka ny toerana (jereo Article 9.6)
Ny fifanarahana ifanaovan'ny mpilalao mandritra ny lalao no atao ny lalao. Tapitra avy hatrany ity lalao ity. (Jereo ny Article 9.1)
Ny lalao dia azo sintomina raha misy toerana mitovy hita na niseho teo amin'ny solaitrabe intelo farafaharatsiny. (Jereo ny Article 9.2)
Mety hilalao ny lalao raha toa ka nahavita hetsika miisa 50 nifanesy farany ny mpilalao nefa tsy namindra pion ary tsy naka sary akory. (Jereo ny Article 9.3)
6. Chess famantaranandro
6.1. 'Chess clock' dia midika hoe famantaranandro misy mpanara-maso indroa, mifandray amin'ny fomba iray ka iray amin'izy ireo ihany no afaka miasa amin'ny fotoana iray.
'Clock' ao amin'ny Laws of Chess dia midika iray amin'ireo mpanara-maso indroa. Ny famantaranandro tsirairay dia misy zana-tsipìka.
'Arrow drop' dia midika hoe faran'ny fotoana nomena ny mpilalao.
6.2. Rehefa mampiasa famantaranandro chess dia tsy maintsy manao hetsika mihetsika farafahakeliny ny mpilalao tsirairay na hetsika rehetra ao anatin'ny fe-potoana voatondro sy / na fotoana fanampiny azo omena aorian'ny hetsika tsirairay. Ireo rehetra ireo dia tsy maintsy faritana mialoha.
Ny fotoana voatahirin'ny mpilalao mandritra ny vanim-potoana iray dia ampiana amin'ny fotoana ao anatin'ny vanim-potoana manaraka, afa-tsy amin'ny maody "fanemorana fotoana"
Amin'ny maody "fanemorana fotoana", Ireo mpilalao roa tonta dia omena 'fotoana fisainana lehibe'. Ny mpilalao tsirairay avy koa dia mahazo "fotoana fanampiny raikitra" isaky ny mihetsika. Ny fanisam-potoana lehibe indrindra dia manomboka aorian'ny fandehan'ny fotoana voatondro. Raha mbola mampijanona ny famantaranandrony ilay mpilalao alohan'ny lany ny "fotoana voafetra" dia tsy miova ny "fotoana lehibe", na inona na inona ny ampahany amin'ny "ora raikitra" ampiasaina.
6.3 Vantany vao latsaka ny zana-tsipìka dia tsy maintsy hamarinina ireo takiana amin'ny andininy 6.2.
6.4 Alohan'ny hanombohan'ny lalao dia anjaran'ny mpitsara ny manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ny famantaranandro.
6.5 Ny famantaranandron'ilay mpilalao miaraka amin'ireo sombin-javatra fotsy dia tsy maintsy manomboka amin'ny ora voatondro hanombohana ny lalao.
6.6 Izay mpilalao mahatratra ny solaitrabe aorian'ny fanombohan'ny session dia ho very ny lalao. Noho izany, ny fe-potoana maharitra dia aotra minitra. Ny fitsipiky ny fifaninanana dia mety hamaritra raha tsy izany.
Raha mamaritra fe-potoana tsy misy hafa ny fitsipiky ny fifaninanana iray dia mihatra izao manaraka izao:
Raha tsy nisy ny mpilalao tonga tamin'ny fotoana nanombohany, ny mpilalao manana satroka fotsy dia tsy maintsy lany ny fotoana rehetra talohan'ny nahatongavany, raha tsy hoe voafaritry ny lalàna mifehy ny fifaninanana na ny mpitsara no manapa-kevitra hafa.
6.7 Mandritra ny lalao, ny mpilalao tsirairay avy, rehefa avy nanao ny diany teo amin'ny solaitrabe, dia tokony hampijanona ny famantaranandrony ary manomboka ny famantaran'ny mpanohitra azy. Ny mpilalao iray dia tsy maintsy avela hampandeha ny pin hatrany amin'ny famantaranandrony. Ny fihetsikao dia tsy heverina ho feno raha tsy efa vitanao izany, raha tsy hoe mamarana ny lalao ilay hetsika (jereo ny Article 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c ary 9.6).
Ny fotoana anelanelan'ny fanaovana ny fiakarana eo amin'ny solaitrabe sy ny fijanonan'ny famantaranandro, ary koa ny fanombohana ny famantaran'ny mpanohitra, dia heverina ho ampahany amin'ny fotoana omena ny mpilalao.
Ny mpilalao dia tokony hampijanona ny famantaranandrony amin'ilay tanana nampiarahany tamin'ilay hetsika. Voarara ny fitazonana ny tananao eo amin'ny tsatok'antsy na ny fametahana azy eo amboniny.
Ny mpilalao dia mila mitantana tsara ny famantaranandro chess. Fady ny mampiasa azy amin'ny hery be loatra, mitazona azy na mandatsaka azy. Ny fampiasana tsy mahomby ny famantaranandro dia hosaziana mifanaraka amin'ny Andininy 13.4.
Raha tsy afaka mampiasa ny famantaranandro ilay mpilalao dia tsy maintsy manome mpanampy iray izy hanao io asa io miaraka amin'ny fanohanan'ny mpitsara. Ny famantaranandronao dia tsy maintsy apetraka araka ny tokony ho izy amin'ny mpitsara amin'ny fomba ara-drariny.
Ny zana-tsipìka iray dia heverina fa nianjera rehefa hitan'ny mpitsara ny zava-misy na rehefa nanao fanambarana marina momba izany ny iray tamin'ireo mpilalao.
Afa-tsy ny iray amin'ireo fepetra voarakitra ao amin'ny Article 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c dia mihatra, ny mpilalao izay mamoy ny isan'ny famindrana voatondro ara-potoana dia ho very ny lalao. Na izany aza, voasintona ny lalao rehefa tonga ny toerana iray izay tsy ahafahan'ny mpanohitra manamarina ny mpanjakan'ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny andiana hetsika ara-dalàna.
The. Ny famantarana rehetra omen'ny famantaranandro dia heverina ho marimaritra iraisana raha tsy misy kilema miharihary. Izay famantaranandro fanaovana échec izay misy lesoka miharihary dia tsy maintsy soloina. Ny mpitsara dia tokony hisolo ny famantaranandro ary hampiasa fahiratan-tsaina amin'ny fametrahana ny fotoana aseho amin'ny tanan'ny famantaranandro izay hisolo ny iray kilema.
ENY. Raha nandritra ny lalao dia hita fa tsy mety ny fametrahana famantaranandro iray na roa, ny mpilalao na ny mpitsara dia tokony hampijanona avy hatrany ny famantaranandro. Ny mpitsara dia tsy maintsy manitsy ny fotoana sy ny counter counter. Ny mpitsara dia tsy maintsy mampiasa ny fitsarany tsara indrindra hamaritana ny fitsipika marina.
6.8 Raha latsaka ny zana-tsipìka roa ary tsy azo atao ny mamaritra hoe iza no latsaka voalohany:
hitohy ny lalao raha mitranga izany amin'ny vanim-potoana rehetra amin'ny lalao, afa-tsy ny vanim-potoana farany.
voasariky ny lalao raha mitranga mandritra ny vanim-potoanan'ny lalao, rehefa tsy maintsy vitaina ny hetsika sisa rehetra.
6.9 Raha mila hajanona ny lalao dia tsy maintsy ajanon'ny mpitsara ny famantaranandro.
Ny mpilalao dia afaka mampiato ny famataran'ora mba hangataka ny fanampian'ny mpitsara, ohatra, rehefa misy fampiroboroboana ary tsy misy ilay takiana ilaina.
Ny mpitsara dia tsy maintsy manapa-kevitra hoe rahoviana no tokony haverina ny lalao na ahoana na ahoana.
Raha ajanon'ny mpilalao ny famantaranandro mba hangataka fanampiana amin'ny mpitsara dia tokony hamaritra ny mpitsara raha manana antony marim-pototra hanaovana izany ny mpilalao. Raha miharihary fa tsy misy antony marim-pototra hampijanonana ny famantaranandro, dia hosazina ny mpilalao mifanaraka amin'ny andininy 13.4
6.10 Raha sendra misy ny tsy fanarahan-dalàna ary / na ny sombintsombiny dia tsy maintsy soloina amin'ny toerana teo aloha, ny mpitsara dia tsy maintsy mampiasa ny fitsarany tsara indrindra hamaritana ny fotoana misy amin'ny famataran'ora. Ny mpitsara dia tokony hanitsy ny isan'ny hetsika mihemotra koa, raha ilaina.
6.11 Ao amin'ny efitrano filalaovana: avela ny efijery, monitor na tabilao rindrina, izay mampiseho ny toerana misy ny tabilao ankehitriny, ny fihetsehana ary ny isan'ny hetsika natao, ary ny famantaranandro izay mampiseho ny isan'ny fihetsiketsehana ihany koa. Saingy, ny mpilalao dia tsy afaka manao fitakiana mifototra amin'ny fampahalalana aseho toy izao fotsiny.
7. Tsy fanarahan-dalàna
7.1 Raha nandritra ny lalao no nahalalana fa tsy marina ny toerana niandohan'ireo sombin-javatra dia hofoanana ny lalao ary lalao vaovao no hatao.
Raha, mandritra ny lalao iray, dia toa hita fa napetraka mifanohitra amin'ny fepetra voalazan'ny andininy 2.1 ny birao, fa mitohy kosa ny lalao, fa ny toerana efa nilalao dia tokony hafindra amin'ny tabilao napetraka tsara.
7.2 Raha nanomboka ny lalao iray tamin'ny fihodinan'ny loko dia tsy maintsy tohizany izany raha tsy ny mpitsara no manapa-kevitra hafa.
Raha manetsika singa iray na maromaro ny mpilalao dia tokony hamerina amin'ny laoniny ny toerana marina amin'ny fotoany izy. Raha ilaina dia afaka mampiato ny famantaranandro ny mpilalao na ny mpanohitra ary miantso ny mpitsara. Ny mpitsara dia mety hanasazy ny mpilalao namindra ireo sombin-javatra.
7.3 Raha, nandritra ny lalao iray dia fantatra fa hetsika tsy ara-dalàna no vita, ao anatin'izany ny tsy fahombiazan'ny fombafomba fampiroboroboana gadona na fisamborana ny mpanjaka mpanohitra, ny toerana eo alohan'ilay tsy fanarahan-dalàna dia tsy maintsy averina. Raha tsy azo averina apetraka io toerana io dia tsy maintsy tohizana amin'ny toerana farany azo fantarina ny lalao, alohan'ny tsy fanarahan-dalàna. Ny famantaranandro dia tsy maintsy apetraka mifanaraka amin'ny Article 6.13. Ny andininy 4.3 sy 4.6 dia mihatra amin'ny hetsika izay misolo toerana hetsika tsy ara-dalàna. Ny lalao dia tokony hitohy amin'ny toerana naverina tamin'ny laoniny.
Raha aorian'ny fandraisana ny hetsika voalaza ao amin'ny Article 7.4.a, ho an'ny hetsika roa tsy ara-dalàna ataon'ny mpilalao iray, dia tsy maintsy manome minitra fanampiny roa ho an'ny mpanohitra isaky ny ohatra ny mpitsara; ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna fahatelo nataon'ny mpilalao iray ihany, ny mpitsara dia tsy maintsy manambara ny lalao very ho an'io mpilalao io.
Na izany aza, voasintona ny lalao rehefa tonga ny toerana iray izay tsy ahafahan'ny mpanohitra manamarina ny mpanjakan'ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny andiana hetsika ara-dalàna.
7.4 Raha, nandritra ny lalao iray, dia hita fa nifindra avy tany an-tranony ireo sombin-javatra ireo dia tokony haverina amin'ny laoniny avy hatrany ny toerana alohan'ny tsy fanarahan-dalàna. Raha tsy voafaritra ny toerana eo alohan'ilay tsy fanarahan-dalàna dia tokony hitohy amin'ny toerana farany azo fantarina alohan'ny tsy fanarahan-dalàna ny lalao. Ny famantaranandro dia tsy maintsy apetraka mifanaraka amin'ny Article 6.13. Ny lalao dia tokony hitohy amin'ny toerana naverina tamin'ny laoniny.
8. Fanamarihana tolotra
8.1 Mandritra ny lalao dia takiana ny mpilalao tsirairay hanoratra amin'ny 'takelaka' voatondro ho an'ny fifaninanana, amin'ny fanamarihana algebra (Jereo ny Fanazavana Fanampiny C), ny fihetsik'izy ireo manokana sy ny an'ny mpanohitra, amin'ny fomba marina, hamindra ny hetsika, amin'ny fomba mazava kokoa sy azo zahana kokoa araka izay azo atao. Fady ny manoratra ny famoriam-bahoaka alohan'ny hanaovana azy eo amin'ny scoreboard, raha tsy rehefa misy fitakiana atao eo ambanin'ny andininy 9.2, 9.3, na ahemotra ny lalao mifanaraka amin'ny andininy 1.a. ao amin'ny Torolàlana momba ny fiainganana nahemotra.
Ny mpilalao dia afaka mamaly ny hetsiky ny mpanohitra alohan'ny hanoratany azy, raha irin'izy ireo.
Tsy maintsy manoratra ny tolotra nataonao teo aloha ianao alohan'ny hanaovana iray hafa.
Ny mpilalao roa dia tokony hiditra amin'ny tolotra antsapaka amin'ny takelaka (Jereo ny Fanazavana Fanampiny C.13).
Raha tsy mahay mitifitra ny mpilalao dia mpanampy iray, izay afaka omen'ny mpilalao sy eken'ny mpitsara, no hanao ny hetsika. Tsy maintsy apetraky ny mpitsara amin'ny fomba ara-drariny ny famantaranandrony.
8.2 Mandritra ny lalao dia tsy maintsy hitan'ny mpitsara hatrany ny takelaka.
8.3 Ny spreadsheets dia fananan'ny mpikarakara hetsika.
8.4 Raha toa ka tsy latsaky ny dimy minitra amin'ny famatrehany ny mpilalao amin'ny fotoana rehetra mandritra ny vanim-potoanan'ny lalao ary tsy mahazo fotoana fanampiny 30 segondra na mihoatra aorian'ny hetsika tsirairay, mandritra ny fotoana sisa tavela dia tsy voatery hameno ny fepetra takian'ny Fizarana 8.1. Vantany vao latsaka ny iray amin'ireo 'zana-tsipìka', ny mpilalao dia tsy maintsy manavao ny takelaka alohan'ny hamindrany sombin-tsambo eo amin'ny solaitrabe.
8.5 Raha tsy takiana na iza na iza isa na isa na isa na mpilalao, mifanaraka amin'ny andininy 8.4, ny mpitsara na mpanampy dia tsy maintsy manandrana mijoro vavolombelona sy manoratra ireo hetsika. Amin'ity tranga ity, avy hatrany aorian'ny fianjeran'ny zana-tsipìka, dia tokony hampijanona ny famantaranandro ny mpitsara. Avy eo ny mpilalao roa tonta dia tsy maintsy manavao ny valin'ny isa azony, amin'ny fampiasana na ny mpitsara na ny mpanohitra.
Raha mpilalao iray monja no takiana hanoratra, mifanaraka amin'ny fepetra voalaza ao amin'ny Article 8.4, raha vantany vao latsaka ny iray amin'ireo zana-tsipìka dia tsy maintsy manavao tanteraka ny takelaka alohan'ny hamindrana sombin-taratasy eo amin'ny solaitrabe izy. Raha mbola anjaranao ny manao hetsika, ny mpilalao dia afaka mampiasa ny takelaka ataon'ny mpanohitra, fa tsy maintsy averiny alohan'ny handehanany.
Raha tsy misy takelaka feno dia tsy maintsy soloin'ny mpilalao amin'ny lalao hafa ny lalao, eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsara na mpanampy. Alohan'ny hanombohan'ny fanarenana ny lalao dia hosoratan'ny mpitsara ny toerana misy ny lalao ankehitriny, ny fotoana ary ny isan'ny hetsika natao, raha misy ity fampahalalana ity.
Raha toa ka lany andro ny takelaka ka aseho fa ny mpilalao iray dia nihoatra ny fetran'ny fotoana, ny hetsika manaraka dia tokony horaisina ho voalohany amin'ny vanim-potoana manaraka, raha tsy misy porofo fa maro ny hetsika natao.
Aorian'ny lalao, ny mpilalao roa dia tsy maintsy manao sonia ny takelaka roa, manondro ny vokatry ny lalao. Na dia tsy marina aza izany dia mijanona io vokatra io, raha tsy hoe ny mpitsara no manapa-kevitra hafa.
9. Lalao voafatotra
9.1 Ny fitsipiky ny fifaninanana dia mety mamaritra fa ny mpilalao dia tsy afaka manaiky hamatotra ambany noho ny hetsika maromaro na amin'ny fomba hafa, raha tsy mahazo ny fankatoavan'ny mpitsara.
9.2 Raha mamela ny fisarihana hifanarahana ny fitsipiky ny fifaninanana dia mihatra izao manaraka izao:
Ny mpilalao te-hanolotra toss dia tokony hanao izany aorian'ny fanatanterahana ny hetsika eny amin'ny solaitrabe, alohan'ny hampiatoana ny famantaranandro ary hanombohana ny famantaran'ny mpanohitra. Ny tolotra amin'ny fotoana hafa mandritra ny lalao dia mijanona ho manan-kery, saingy ny andininy 12.6 dia tsy maintsy tandremana. Ny fepetra dia tsy azo ampidirina ao anaty tolo-kevitra. Amin'ireo tranga roa ireo dia tsy azo esorina ilay tolotra ary hijanona ho manan-kery mandra-paneken'ny mpanohitra azy, holaviny am-bava, holaviny amin'ny fikasihana sombin-javatra iray amin'ny fikasana hanetsika na hisambotra azy, na raha mifarana amin'ny fomba hafa ny lalao.
Ny tolotra fisarihana dia tokony homarihin'ny mpilalao roa ao amin'ny takelaka misy marika (Jereo ny Fanazavana Fanampiny C13).
Ny fangatahana fisarihana mifototra amin'ny Andininy 9.2, 9.3 na 10.2 dia ho raisina ho tolotra fisarihana.
9.2 Nosarihana ny lalao, taorian'ny fitarainana marina nataon'ny mpilalao izay manana ny anjarany hilalao, rehefa mitovy ny toerany dia in-telo farafahakeliny (tsy voatery amin'ny famerimberenan'ny hetsika)
efa akaiky hiseho, raha manoratra ny dianao eo amin'ny takelaka voalohany ianao ary manambara amin'ny mpitsara ny fikasanao hanao izany hetsika izany, na
vao niseho ary ilay mpilalao milaza ny kravaty dia manana ny anjarany hilalao.
Ireo toerana arakaraka ny (a) sy (b) dia heverina ho mitovy, raha toa ka samy manana ny anjarany ny mpilalao iray, ny sangan'asa mitovy karazana sy ny loko dia mitana kianja iray ihany, ary ny mety ho fihetsiky ny sombin'ireo mpilalao roa dia mitovy.
Ireo toerana dia tsy hitoviana raha toa ka tsy azo raisina toy izao intsony ny gadona mety ho voasambotra 'en passant'. Rehefa voatery mihetsika ny mpanjaka (na rook) dia very ny zony handroaka, raha misy, aorian'ny famindrana azy.
9.3. Voafatotra ny lalao, noho ny fitarainan'ny mpilalao manana anjarany hilalao, raha:
noraketiny an-tsoratra ny fivezivezeny tamin'ny takelaka fiasany ary nanambara tamin'ny mpitsara ny fikasany hamono ny asany, izay hiteraka fihetsika 50 natao ho an'ny mpilalao tsirairay nefa tsy nisy fihetsiketsehana na tsy nisy gadra akory, na
Ny hetsika 50 nifanesy farany dia nataon'ny mpilalao roa tonta, tsy nisy hetsika na gadra.
Raha mikitika sombin-javatra iray araka ny Andininy 4.3 ny mpilalao nefa tsy mitaky fatorana, dia very ny zony hitaky, araka ny andininy 9.2 sy 9.3, tamin'io fivezivezena io.
Raha mitaky fatorana ilay mpilalao, araka ny Andininy 9.2 sy 9.3 dia azony atao ny mampiato ireo famantaranandro roa. (Jereo Andininy 6.12.b) Tsy azonao esorina ny fitakiana
Raha tapa-kevitra ny hahitsy ny fitakiana dia sintonina avy hatrany ny lalao
Raha tapa-kevitra ny tsy marina ny fitakiana dia tsy maintsy ampiana telo minitra ny fotoana fisaintsainan'ny mpanohitra. Dia tokony hitohy ny lalao. Raha ny fangatahana dia atao amin'ny alàlan'ny tolotra nomanina, io tolotra io dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny andininy 4.
9.4 Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/ Io dia mamarana avy hatrany ny lalao raha toa ka ara-dalàna ny hetsika mamokatra ity toerana ity.
10. Vita haingana
10.1 Ny 'fifaranana haingana' dia ny dingan'ny lalao iray izay tsy maintsy anaovana ny hetsika (sisa) ao anatin'ny fetra voafaritra.
10.2 Raha manana latsaky ny roa minitra eo amin'ny famatrehany ilay mpilalao, miaraka amin'ny fihodinana hilalaovany, dia afaka mangataka fisarihana izy alohan'ny hilatsahan'ny zana-tsipìkany. Tsy maintsy miantso ny mpitsara izy ary mety hampijanona ny famantaranandro (Jereo ny Andininy 6.12.b).
Raha manaiky ny mpitsara fa tsy miezaka ny handresy ny lalao ny mpanohitra, amin'ny fomba mahazatra, na ny hoe tsy afaka mandresy amin'ny fomba mahazatra ny mpanohitra, dia tokony hanambara fatorana izy. Raha tsy izany dia tokony hahemotra ny fanapahan-kevitrao na holavinao ny fitoriana. Raha mampihemotra ny fanapaha-keviny ny mpitsara dia azo avela maharitra roa minitra ny fotoana ilain'ny mpanohitra ary tsy maintsy mitohy ny lalao raha azo atao eo anatrehan'ny mpitsara. Ny mpitsara dia tsy maintsy manambara ny valiny farany any aoriana amin'ny lalao na faran'izay haingana aorian'ny nilatsahan'ny zana-tsipìka. Tsy maintsy manambara fifamatorana ianao raha ekenao fa ny toerana farany dia tsy azo raisina amin'ny fomba mahazatra, na hoe tsy nanandrana ampy handresy ny lalao tamin'ny fomba mahazatra ny mpanohitra.
Raha mandà ny fitakiana ny mpitsara dia tsy maintsy manana roa minitra fanampiny ny mpanohitra.
Ny fanapahan-kevitry ny mpitsara dia farany (tsy misy fampiakarana fitsarana) ho an'ny (a), (b), (c).
11. Raha tsy hoe nambara teo aloha, raha tsy izany, ny mpilalao mandresy ny lalaon'izy ireo, na mandresy ny WO, dia mahazo isa (1), ilay mpilalao resin'ny WO na resin'i WO dia mahazo (0) pt ary ilay mpilalao izay afatory ny lalao dia mahazo ny isa antsasaky ny teboka (½).
12. Fihetsika ataon'ny mpilalao.
12. 1 Ny mpilalao dia tsy ho afaka handray andraikitra izay mitarika laza ratsy eo amin'ny lalao chess.
Ny mpilalao 2 dia mety tsy handao ny "tontolon'ny filalaovana" raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsara. Ny tontolon'ny lalao dia misy ny efitrano filalaovana, trano fidiovana, faritra fisakafoana maivana, faritra natokana ho an'ny mpifoka sigara sy toerana hafa natolotry ny mpitsara. Ilay mpilalao izay manana ny anjarany hilalao dia tsy afaka miala amin'ny efitrano filalaovana raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsara.
12.2 Mandritra ny lalao dia voarara ny fampiasana ny naoty, loharanom-baovao na torohevitra, na hamakafaka amin'ny solaitrabe hafa.
Raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsara dia voarara tsy hitondra finday na fitaovana elektronika hafa ao amin'ny efitrano filalaovana ny mpilalao, raha tsy tafasaraka tanteraka. Raha misy amin'ireo fitaovana ireo mamoaka tabataba dia tsy maintsy resin'ny mpilalao ilay lalao. Tsy maintsy mandresy ny mpanohitra. Na izany aza, raha tsy maharesy ny lalao ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny andiana hetsika ara-dalàna, dia tsy maintsy heverina ho fatorana ny isa azony.
Ny fifohana sigara ihany no avela ao amin'ny faritra faritan'ny mpitsara.
Ny takelaka dia tsy tokony hampiasaina handraketana ireo tolotra, ora famantaranandro, fanolorana fatorana, rakitsoratra mifandraika amin'ny fitarainana, ary data hafa mifandraika amin'izany.
Ireo mpilalao nahavita ny lalaony dia tokony hoheverina ho mpijery.
Fady ny manakorontana na manelingelina ny mpanohitra amin'ny fomba rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fitarainana tsy mitombina, ny tolo-tsindrim-peo tsy voatrandraka, na ny fampisehoana loharanom-peo ao amin'ny faritra filalaovana.
Ny fanitsakitsahana ny ampahany amin'ny andininy 12.1 ka hatramin'ny 12.6 dia hiteraka ny fampiharana ny sazy voalaza ao amin'ny andininy 13.4.
12.3 Ny fandavana maharitra ny mpilalao tsy hanaraka ny Laws of Chess dia tokony hosaziana amin'ny famoizana ny lalao. Ny mpitsara dia tsy maintsy manapa-kevitra ny naotin'ny mpanohitra.
Raha samy meloka ny mpilalao roa tonta amin'ny andininy faha-12.8, dia hambara fa very ho azy roa tonta ny lalao.
Raha ny zavakanto. 10.2.d. na Appendix D, ny mpilalao dia tsy afaka manao antso avo amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara.
Amin'ny tranga hafa, ny mpilalao dia afaka manao antso avo amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara iray, raha tsy hoe misy fitsipiky ny fifaninanana mamaritra izany.
13. Andraikitry ny mpitsara
13.1 Ny mpitsara dia tsy maintsy manamarina fa voahaja tsara ny Lalànan'ny Chess.
Ny mpitsara dia tsy maintsy mihetsika amin'ny tombontsoan'ny fifaninanana. Tokony ho azonao antoka fa misy tontolo filalaovana tsara, mba tsy hanelingelina ny mpilalao. Tokony hanara-maso ihany koa ny fizotran'ny fifaninanana.
Ny mpitsara dia tsy maintsy mandinika ny lalao, indrindra rehefa tonga ara-potoana ny mpilalao, mampihatra ny fanapahan-kevitra noraisiny, ary mametraka sazy amin'ireo mpilalao raha ilaina izany.
13.2 Mety hampihatra ny iray na mihoatra amin'ireto sazy manaraka ireto ny mpitsara:
ampitomboy ny fotoana sisa tavela amin'ny mpanohitra,
ahenao ny fotoana sisa tavela amin'ilay mpilalao manafintohina,
manambara ny lalao very,
ahenao ny isa azon'ny mpilalao manafintohina,
ampitomboy ny isa azon'ny mpanohitra amin'ny lalao farany ambony araka izay azo atao amin'io lalao io,
fandroahana ny hetsika
Afaka manome fotoana fanampiny ny mpilalao iray na roa ny mpitsara raha sendra misy korontana ivelany mandritra ny lalao.
Ny mpitsara dia tsy tokony hiditra an-tsehatra amin'ny lalao iray, afa-tsy amin'ireo tranga voalaza ao amin'ny Lalàn'i
chess. Tsy tokony hanondro ny isan'ny hetsika natao, raha tsy rehefa mampihatra ny andininy ao amin'ny andininy 8.5, raha latsaka ny iray amin'ireo zana-tsipìka. Ny mpitsara dia tokony hisoroka ny fampandrenesana amin'ny mpilalao fa nifindra toerana ny mpifaninana aminy na tsy nanomboka ny famantaranandrony ny mpilalao.
The. Ireo mpijery sy mpilalao amin'ny lalao hafa dia tsy tokony hiteny na hanelingelina lalao amin'ny fomba rehetra. Raha ilaina, ny mpitsara dia afaka mandroaka ireo mpandika lalàna amin'ny tontolo milalao. Raha misy mahatsikaritra ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy mahazo mampahafantatra ny mpitsara fotsiny izy ireo.
ENY. Raha tsy mahazo alalana ny mpitsara dia voarara ny fampiasana finday na fitaovana fampitaovana any an-toerana sy amin'ny faritra hafa mifanindry tendren'ny mpitsara.
14.1 Ny federasiona miasa dia afaka mangataka FIDE hanome fanapahan-kevitra ofisialy momba ny olana mifandraika amin'ny Laws of Chess.
A. Chess haingana
A1 Ny lalao 'Quick Chess' dia iray amin'ireo hetsika izay tsy maintsy tanterahina ao anatin'ny fetra voafaritra voafaritra 15 minitra farafahakeliny, saingy latsaky ny 60 minitra ho an'ny mpilalao tsirairay; na ny fotoana tena lehibe + in-60 isaky ny increment dia farafaharatsiny 15 minitra, fa latsaky ny 60 minitra ho an'ny mpilalao tsirairay.
A2 Ny mpilalao dia tsy takiana amin'ny firaketana ny fihetsiky ny lalao.
A3 Rehefa misy fanaraha-maso sahaza ny lalao (ohatra, mpitsara iray amin'ny lalao telo fara fahakeliny) dia mihatra ny Fitsipiky ny fifaninanana.
A4 Rehefa tsy ampy ny fanaraha-maso dia mihatra ny Fitsipiky ny Fifaninanana, raha tsy rehefa fehezin'ireto lalàna manaraka ny Chess Rapid Chess ireto:
Raha vantany vao nanao fihetsiketsehana telo ny mpilalao tsirairay dia tsy misy fitarainana azo atao momba ny fametrahana ireo sombin-javatra diso, ny fametrahana ny tabilao na ny famantaranandro. Raha misy fanovana toerana eo amin'ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy dia tsy mahazo manipy miaraka amin'ity mpanjaka ity.
Ny mpitsara dia tsy maintsy miditra an-tsehatra mifanaraka amin'ny fepetra voalaza ao amin'ny And. 4 (Act of Moving the pieces), raha toa ka takian'ny mpilalao iray na roa izy ireo.
Ny hetsika tsy ara-dalàna dia vita raha vantany vao manomboka ny famantaranandro. Zon'ny mpanohitra ny milaza fa nahavita hetsika tsy ara-dalàna ilay mpilalao, raha toa ka tsy nanao ny diany izy. Aorian'ny fitarainana toy izany vao tokony hiditra an-tsehatra ny mpitsara. Na izany aza, raha fehezin'ny mpanjaka roa na tsy vita ny fampiroboroboana gadona dia tokony hiditra an-tsehatra ny mpitsara raha azo atao.
1. Ny zana-tsipìka dia heverina fa nianjera rehefa nanao fanambarana marina ny iray tamin'ireo mpilalao. Ny mpitsara dia tsy maintsy mijanona tsy hanondro zana-tsipìka milatsaka, fa mety hiditra an-tsehatra raha latsaka ny zana-tsipìka roa.
A5 Raha hitaky fandresena ara-potoana dia tsy maintsy ajanon'ilay nitaky ny famantaranandro roa ary ampandrenesina ny mpitsara.
Mba hahombiazan'ny fitakiana, aorian'ny fijanonan'ny famantaranandro, dia tsy maintsy 'miakatra' ny zana-panahin'ny mpangataka ary hidina ny zana-tsipikan'ny mpanohitra aorian'ny fijanonan'ny famantaranandro.
A6 Raha mivoaka ny zana-tsipìka roa araka ny voalaza ao amin'ny (1) sy (2) dia tsy maintsy ambaran'ny mpitsara fa fatotra ilay lalao.
B1 Ny lalao 'kilat' dia iray amin'ireo hetsika izay tsy maintsy tanterahina ao anatin'ny fetra voafaritra voafaritra latsaky ny 15 minitra ho an'ny mpilalao tsirairay; na ny fotoana tena lehibe + in-60 isaky ny increment dia latsaky ny 15 minitra.
B2 Rehefa misy fanaraha-maso sahaza ny lalao (mpitsara iray isaky ny lalao), dia mihatra ny Fitsipiky ny Fifaninanana sy ny andininy ao amin'ny Andininy A2.
B3 Rehefa tsy ampy ny fanaraha-maso dia tokony hampiharina ireto manaraka ireto.
Ny lalao dia ho fehezin'ny Laws of Rapid Chess araka ny voalaza ao amin'ny Appendix A, raha tsy rehefa fehezin'ireto Laws of Lightning manaraka ireto.
Ny lahatsoratra 10.2 sy A4c dia tsy mihatra.
Ny hetsika tsy ara-dalàna dia vita raha vantany vao manomboka ny famantaranandro. Alohan'ny handehanany manokana dia manan-jo hangataka fandresena ny mpanohitra. Na izany aza, manan-jo hangataka antsapaka ny mpilalao alohan'ny handehanany, raha tsy voafehin'ny mpanohitra izany noho ny andiany mety ho fihetsehana ara-dalàna. Aorian'ny fahavitan'ny mpanohitra azy dia tsy azo ahitsy ny hetsika tsy ara-dalàna raha tsy misy fifanarahana iraisana raha tsy misy ny fitsabahan'ny mpitsara.
Famaritana ny rafitra algebra
C1 Amin'ity famaritana ity, ny "sombintsombiny" dia midika hoe sombin-javatra rehetra, afa-tsy gadra.
C2 Ny sombintsombiny tsirairay dia aseho miaraka amin'ny litera voalohany sy anarany lehibe. Ohatra: R = mpanjaka, D = mpanjakavavy, T = rook, B = eveka, C = Knight. (Raha ny soavaly, ampiasao ny N.)
C3 Ho an'ny litera voalohany amin'ny anaran'ny sombintsombiny, afaka mampiasa ny litera voalohany amin'ny anarana ny mpilalao satria mahazatra azy ao amin'ny fireneny. Ohatra: F = fou (frantsay ho an'ny eveka), L = loper (Holandey ho an'ny eveka). Ao amin'ny gazety vita pirinty dia atolotra ny fampiasana akanjo.
Pawns C4 Izy ireo dia tsy aseho amin'ny taratasiny voalohany, fa ekena amin'ny tsy fisian'izy ireo. Ohatra: e5, d4, a5.
C5 Ny tsanganana valo (ankavia miankavanana ho an'ny fotsy ary ankavanana miankavia ho an'ny mainty) dia aseho amin'ny litera kely, a, b, c, d, e, f, g, ary h, tsirairay avy.
C6 Ireo laharana valo (hatrany ambany ka hatrany ambony ho an'ny mpilalao fotsy ary avy any ambony ka hatrany ambany ho an'ny mpilalao mainty) dia isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ary 8 avy. Vokatr'izany, amin'ny toerana fanombohana dia apetraka amin'ny laharana voalohany sy faharoa ireo singafotsy; Ireo singana mainty dia apetraka amin'ny laharana fahavalo sy fahafito.
C7 Vokatry ny fitsipika etsy ambony, ny tsirairay amin'ireo boaty 64 dia aseho tsy tapaka miaraka amina tarehin-tsoratra tokana miaraka amina isa
C8 Ny hetsiky ny sombin-javatra tsirairay dia asehon'ny a) ny litera voalohany amin'ny anaran'ny sombin-kevitra ary b) ny toerana ahatongavany. Tsy misy tsivalana eo anelanelan'ny a) sy b).
Ohatra: Be5, Nf3, Rd1.
Raha ny mpandeha an-tongotra dia ny toerana fahatongavana ihany no voalaza. Ohatra: e5, d4, a5.
C9 Rehefa azo ny sombin-javatra iray, dia asisika x eo anelanelan'ny (a) litera voalohany sy ny anaran'ny sombin-kevitra ary b) ny toerana ahatongavany. Ohatra: Bxe5, Nxf3, Rxd1. Rehefa misambotra ny pion, dia tsy maintsy aseho ny tsanganana fanombohana, avy eo x, amin'ny farany ny kianjan'ny fahatongavana. Ohatra: dxe5, gxf3, axb5. Raha misy ny fisamborana 'en passant' dia omena ny kianja kendrena, izay manondro ny toerana nilatsahan'ny pawn tamin'ny farany, ary ny litera 'ep' dia nampiana an'io. Ohatra: exd6 ep
C10 Raha toa ny taila roa mitovy afaka mandeha amin'ny kianja iray, dia aseho toy izao manaraka izao ny taila izay mihetsika:
Raha mitovy ny laharana roa: amin'ny a) ny litera voalohany amin'ny anaran'ny sombintsombiny, b) ny tsanganana amin'ny toeran'ny fiaingana, ary c) ny toerana ahatongavany.
Raha toa ka eo amin'ny tsanganana iray ihany ireo sombin-javatra roa ireo: amin'ny a) ny litera voalohany amin'ny anaran'ny sombintsombiny, b) ny laharan'ny toeran'ny fiaingana, ary c) ny toerana ahatongavana
Raha samy hafa ny tsanganana sy ny laharana, dia aleo ny fomba 1). Raha misy fisamborana dia azo ampiana 'x' eo anelanelan'ny b) sy c).
Misy Knights roa, amin'ny kianja g1 sy e1, ary ny iray amin'izy ireo dia mifindra amin'ny square f3: Ngf3 na Nef3, araka ny tranga misy.
Misy kambana roa, eo amin'ny kianja g5 sy g1, ary ny iray amin'izy ireo dia mifindra amin'ny f3 toradroa: C5f3 na C1f3, araka ny tranga misy.
Misy Knight roa, ao amin'ny trano h2 sy d4, ary ny iray amin'izy ireo dia mifindra any amin'ny trano f3: Nf3 na Ndf3, araka ny tranga misy.
Raha misambotra amin'ny f3 ny fisamborana dia ovaina ireo ohatra etsy ambony amin'ny alàlan'ny fampidirana 'x':
1) Raha gadra roa no afaka misambotra ilay sanganasa mitovy amin'ny an'ny mpanohitra, ny pion izay nifindra dia asehon'ny a) ny litera amin'ny tsanganana voalohany, b) a 'x', c) ny kianja farany. Ohatra: raha misy paoma fotsy eo amin'ny kianja c4 sy e4 ary sombina mainty eo amin'ny d5, ny fanamarihana ny fivezivezena an'i White dia cxd5 na exd5, raha ilaina.
Raha misy fampiroboroboana gadona, dia aseho ny fihetsika gadra, arahin'ny taratasy voalohany amin'ilay sangan'asa vaovao. Ohatra: d8D, f8C, b1B, g1T.
Ny tolotra fatorana dia tsy maintsy asiana marika ho (=)
Fanafohezana tena ilaina:
0-0 = bobongolo misy tilikambo h1 na tilikambo h8 (vatolampy kely)
0-0-0 = bobongolo misy tilikambo a1 na tilikambo a8
(vatolampy lehibe) x = misambotra
+ = zahao ++ na # = mpiara-miasa
ep = misambotra "mandalo"
Tsy voatery ny manoratra check, checkmate ary misambotra amin'ny takelaka.
Tapitra haingana fa tsy misy mpitsara eo amin'ny toeran'ny lalao
Amin'ny tranga izay fehezin'ny andininy faha-10 ny lalao dia azon'ny mpilalao atao ny mitaky antsapaka rehefa manana roa minitra latsaky ny famantaranandro izy ary alohan'ny hilatsahan'ny zana-tsipìkany. Tapitra ny lalao. Azonao atao ny mangataka mifototra amin'ny:
fa ny mpanohitra anao dia tsy afaka mandresy amin'ny fomba mahazatra, sy / na
fa ny mpanohitra anao tsy manao ezaka handresy amin'ny fomba mahazatra.
Amin'ny hypothèse (a), ny mpilalao dia tsy maintsy mirakitra ny toerana farany ary manamarina izany ny mpanohitra azy.
Amin'ny hypothèse (b), ny mpilalao dia tsy maintsy mirakitra ny toerana farany ao anaty takelaka nohavaozina.
Ny mpanohitra dia tsy maintsy manamarina ny toerana farany sy ny takelaka.
Ny fitoriana dia tokony hatolotra amin'ny arbitrator iray, ary ny fanapahan-keviny dia ny farany.
Fitsipiky ny lalao miaraka amin'ireo olona jamba sy mahita ampahany.
Ny talen'ny fifaninanana E1 dia tokony hanana fahefana hampifanaraka ny lalàna voalaza etsy ambany arakaraka ny zava-misy eo an-toerana.
Amin'ny lalao fifaninanana lalao fifaninanana eo amin'ny mpilalao mahita sy ny kilemaina amin'ny fahitana (jamba ofisialy), na ny mpilalao dia mety mitaky fampiasana tabilao roa, ireo mpilalao mandinika miaraka amin'ny tabilao mahazatra sy ilay mpilalao kilemaina amin'ny fahitana miaraka amin'ny tabilao namboarina manokana. Ny tokotanin-tsambo namboarina manokana dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
refy farany ambany 20 x 20 cm;
somary maivamaivana ireo trano mainty;
loaka kely isaky ny trano;
Ny sombin-javatra tsirairay dia tsy maintsy manana pin kely izay mifanaraka tsara amin'ny lavaky ny trano;
Sombina maodely "Staunton", ireo tapa-mainty dia voamarika manokana.
E2 Ireto fitsipika manaraka ireto dia tokony hitantana ny lalao:
1. Ny fanolorana dia tsy maintsy ambara mazava, averin'ny mpanohitra ary vonoina amin'ny solaitrabe. Rehefa mampiroborobo kitapo, ny mpilalao dia tsy maintsy manambara izay sombiny voafidy. Mba hanazavana mazava araka izay azo atao ilay fanambarana dia soso-kevitra hampiasaina
Ireto anarana manaraka ireto fa tsy litera algebra
Ny laharana avy amin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty dia tokony hanana isa amin'ny Alemanina:
8 acht (valo)
Nambara ny fitetezam-paritra "Lange Rochade”(Grande Roque amin'ny fiteny alemà) sy“ Kurze Rochade ”(Castling kely amin'ny fiteny alemà).
Ireo anarana dia mampiasa ny anarana fiteny alemanina:
"Koenig "(Mpanjaka)," Dame "(Mpanjakavavy)," Turm "(Rook)," Laeufer "(Eveka)," Springer "(Soavaly) ary" Bauer "(Pawn).
Ao amin'ny tabilaon'ny mpilalao manana fahasembanana eo amin'ny fahitana, ny sombin-javatra dia heverina fa nokasihina rehefa nesorina tamin'ny lavaka fanarenana.
Ny tolotra dia heverina fa hovonoina rehefa:
raha misy fisamborana, raha toa ka nesorina tao amin'ny solaitr'ilay mpilalao ilay sombin-kazo nakana;
nisy ampahany napetraka ao anaty loaka fametahana hafa;
Nambara ny tolotra.
Amin'izay vao manomboka ny famantaranandro.
Raha vantany vao ampidirina ny teboka 2 sy 3 etsy ambony, dia manan-kery ho an'ny mpilalao sikidy ny fitsipika mahazatra.
4. Ny fampiasana famataran'asa manokana namboarina ho an'ny mpilalao kilemaina dia avela. Ny fiambenana dia tokony hanana ireto toetra manaraka ireto koa:
dial iray ahitsy amin'ny tanana nohamafisina, isaky ny dimy minitra dia nasiana teboka ary isaky ny 15 minitra misy teboka roa;
Zana-tsipìka azo tsapa amin'ny fikitika. Mila mitandrina manokana fa ny zana-tsipìka dia ahitsy mba hahafahan'ny mpilalao mahatsapa ny tanan'ny dimy minitra farany amin'ny adiny iray manontolo.
Ny mpilalao kilemaina amin'ny fahitana dia tsy maintsy mirakitra ny lalao amin'ny soratra Braille, na manoratra ireo hetsika amin'ny tanana, na manoratra azy ireo amin'ny kasety andriamby.
Ny lesoka rehetra amin'ny fanambaràna hetsika dia tokony ahitsy eo alohan'ny fotoana hanombohan'ny fiambenana.
Raha mandritra ny lalao dia misy toerana samihafa miseho amin'ny takelaka roa, tsy maintsy ahitsy izy ireo amin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpitsara ary manantona ny takelaka asehon'ireo mpilalao roa. Raha mifanandrify ireo takelaka roa, dia tokony hanitsy ny toerana misy azy ireo ilay mpilalao nanoratra ny fihetsika tokony hatao, saingy diso ny fanatanterahana azy, mba hifanaraka amin'ny hetsika aseho amin'ny takelaka.
Raha sendra misy divergence ao amin'ireo takelaka roa dia tokony haverina amin'ny toerany ilay toerana mba hifanindry ny takelaka roa ary hamerina ireo famantaranandro arak'izay ilaina ny mpitsara raha ilaina izany.
Ny mpilalao kilemaina amin'ny maso dia manan-jo hampiasa mpanampy izay hanao na iray amin'ireto adidy manaraka ireto:
Ataovy eo amin'ny solaitrin'ny mpanohitra ny fihetsiky ny mpilalao tsirairay;
Lazao ny fihetsiky ny mpilalao roa tonta;
Raketo an-tsoratra ao amin'ny takelaka ataon'ny mpilalao manana fahasembanana ara-pahitana ny fihetsika ary atombohy ny famantaran'ny mpanohitra (raha raisina ny fitsipika 3.c);
ampahafantaro ny mpilalao kilemaina amin'ny fahitana, noho ny fangatahany fotsiny, ny isan'ny hetsika natao sy ny fotoana lanin'ny mpilalao roa tonta;
mitaky fandresena raha toa ka latsaka ny famantaranandron'ny mpanohitra ary ampahafantaro ny mpitsara rehefa nanohina ny iray tamin'ireo sombin-javatra ilay mpilalao maminavina.
Tanteraho ny fomba fiasa ilaina raha toa ka miato ny fiainganao.
10. Raha tsy mampiasa mpanampy ilay mpilalao kilemaina maso dia afaka mangataka olona iray handray andraikitra amin'ny fanatanterahana ny adidy voalaza ao amin'ny teboka 9.a sy 9.b.
Fitsipika chess 960
F1 Alohan'ny lalao Chess960 dia apetraka an-tsokosoko ny toerana fanombohana, mifehy ny lalàna sasany. Aorian'izany dia milalao amin'ny fomba mitovy amin'ny chess kilasika ny lalao. Manokana, ny singa sy ny pion dia manana ny fihetsiny mahazatra, ary ny tanjon'ny mpilalao tsirairay dia ny manamarina ny mpanjaka mpanohitra azy.
Fepetra takiana amin'ny toerana hanombohana
Ny toerana fanombohana ny Chess960 dia tsy maintsy manaraka fitsipika sasany. Ireo pawn fotsy dia tsy maintsy apetraka amin'ny laharana faharoa toy ny amin'ny chess mahazatra. Ny sisan'ny fotsy sisa dia apetraka an-tsokosoko eo amin'ny laharana voalohany, saingy miaraka amin'ireto fetra manaraka ireto:
Ny mpanjaka dia apetraka eo anelanelan'ny tilikambo roa, ary
Ny eveka dia apetraka amin'ny trano mifanohitra amin'ny lokony, ary
Ny sombin-javatra mainty dia apetraka mifanandrify tanteraka amin'ireo faritry ny fotsy.
Ny toerana voalohany dia mety hiteraka alohan'ny fiainganana, na amin'ny alàlan'ny programa informatika na amin'ny alàlan'ny fampiasana angona, vola na karatra, sns.
Fitsipika castling an'ny Chess960
Chess960 dia mamela ny mpilalao tsirairay hanipy indray mandeha isaky ny lalao, amin'ny mpanjaka iraisana ary ny rook mihetsika amin'ny hetsika iray. Na izany aza, ilaina ny fandikana ny lalao kilalao chess mahazatra amin'ny filokana satria ny lalàna nentim-paharazana dia mihevitra ny toerana manomboka ny mpanjaka sy ny rook izay matetika tsy mihatra amin'ny chess 960.
Ao amin'ny Chess960, arakaraka ny toeran'ny mpanjaka sy ny rook alohan'ny handefasana azy, ny castling dia vita amin'ny fampiasana iray amin'ireo fomba efatra:
Fihetsiketsehana vato roa: hetsika miaraka amin'ny mpanjaka arahin'ny fiakarana miaraka amin'ny rook.
Castling amin'ny transposition: fifanakalozana ny toeran'ny mpanjaka amin'ny an'ny rook.
Castling miaraka amina mpanjaka tokana: Aza mihetsika mpanjaka tokana.
Mandrosoa tilikambo tokana: Aza manao hetsika mihetsika iray fotsiny.
Rehefa atsipy amin'ny solaitra ara-batana miaraka amin'ny mpanohitra olombelona ianao, dia asaina miala eo ambonin'ny tabilao manakaiky ny toerana farany misy azy ny mpanjaka, ny rook dia hiala amin'ny toerana voalohany mankany amin'ny toerana farany, ary amin'ny farany dia hapetraka ny mpanjaka. Ny trano hodianao.
Aorian'ny castling, ny toerana farany an'ny rook sy ny mpanjaka dia hitovy tanteraka amin'ny chess kilasika.
Ka aorian'ny castling grand (fantatra amin'ny 0-0-0 sy fantatra amin'ny cast of the queen-side in chess orthodox, ny mpanjaka dia ao amin'ny trano c (c1 ho an'ny fotsy ary c8 ho an'ny mainty) ary ny rook dia ao an-trano d (d1 ho an'ny fotsy ary ny D8 ho an'ny mainty) Rehefa avy nilatsaka tamin'ny toradroa g
(voamarika ho 0-0 ary fantatra amin'ny anarana hoe mpanjaka eo amin'ny chess orthodox), eo amin'ny kianja g ny mpanjaka (g1 ho an'ny fotsy ary ho an'ny mainty ny g8) ary ny rook dia ho eo amin'ny kianja f (f1 ho an'ny fotsy sy f8 mainty).
1. Mba hisorohana ny lesoka rehetra dia tsara ny miteny hoe "hanomboka aho" alohan'ny hanaovana ny tolotra.
2. Amin'ny toerana fanombohana sasantsasany, ny mpanjaka na ny rook (fa tsy ny roa) dia tsy mihetsika mandritra ny fitetezana.
3, amin'ny toerana fanombohana sasany, ny castling dia azo atao mialoha ny fotoana amin'ny maha hetsika voalohany azy.
Ny efamira rehetra eo anelanelan'ny kianja fanombohana sy fiafaran'ny mpanjaka (ao anatin'izany ny kianja farany), ary ny efamira rehetra eo anelanelan'ny kianja fanombohana sy fiafaran'ny rook (ao anatin'izany ny kianja fiafarana), dia tsy maintsy banga, afa-tsy ny kianja mpanjaka sy rook .
Amin'ny toerana fanombohana sasantsasany, ny kianja sasany, izay tokony ho banga tamin'ny chess nentim-paharazana, dia mety hipetraka mandritra ny filalaovana Casting. Ohatra, aorian'ny fitobiana lehibe dia azo atao, ny trano a, ny boe dia mbola tazonina ihany, ary aorian'ny filasiana kely dia mety hisy trano sy / oh hipetrahana.
Toro-lalana raha toa ka mila hahemotra ny lalao iray
1. Raha tsy mifarana ny lalao amin'ny faran'ny fotoana voatondro hanaovana ny lalao dia tsy maintsy fantatry ny mpitsara fa manam-potoana hilalaovana ilay mpilalao, "asio tombo-kase" ny hetsika manaraka. Ny mpilalao dia tsy maintsy manoratra ny diany eo amin'ny takelaka amin'ny fanamarihana tsy mazava, apetraho ao anaty valopy ny takelaka misy azy sy ny takelaky ny mpanohitra azy, ary asio tombo-kase ary aorian'izay ajanony ny famantaranandro, tsy manomboka ny famantaranandron'ny mpanohitra.
Raha mbola tsy mijanona ny famantaranandro dia zon'ny mpilalao ny manova ny hetsika miafiny. Raha, rehefa nampandrenesin'ny mpitsara fa ny hetsika manaraka no ho tsiambaratelo, dia nanao ilay hetsika teo amin'ny solaitrabe ilay mpilalao, dia tsy maintsy noraketiny an-tsoratra ao anaty takelaka ho hetsika miafina nataony izany.
ENY. Hitsara ny mpitsara fa ilay mpilalao manana ny anjarany hilalao, izay te hampiato ny lalao alohan'ny faran'ny fivoriana, dia nampiasa ny fotoana sisa tavela rehetra hamaranana ny fotoana.
2. Ny valopy dia tsy maintsy manondro:
ny anaran'ny mpilalao;
ny toerana eo alohan'ilay hetsika miafina, ary
ny fotoana ampiasain'ny mpilalao, ary
ny anaran'ny mpilalao nanao ny hetsika miafina, ary
ny laharana tolo-kevitra miafina ary
ny tolotra fifamatorana, raha ny tolo-kevitra dia natao talohan'ny fampiatoana ny lalao, ary
ny daty, ny ora ary ny toeran'ny famerenana ny lalao.
3. Ny arbitrator dia tsy maintsy manamarina ny maha-marina ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny valopy ary tompon'andraikitra amin'ny fitehirizana izany.
4.Raha toa ny mpilalao manolotra tady aorian'ny nanaovan'ny mpanohitra ny hetsika miafina, dia mijanona ho manan-kery mandra-paneken'ny mpilalao azy na holaviny, mifanaraka amin'ny andininy faha-9.1.
5Alohan'ny hamerenana ny lalao dia tokony apetraka eo amin'ny solaitrabe ny toerana eo alohan'ny hetsika miafina ary ankoatr'izay, ny fotoana ampiasain'ny mpilalao rehefa naato ny lalao dia tsy maintsy aseho amin'ny famantaranandro.
6.Raha alohan'ny hamerenana ny lalao dia nifanaraka tamin'ny fifanarahana ny mpilalao, na nampandrenesin'ny iray tamin'ireo mpilalao ny mpitsara fa hiala izy, dia tapitra ny lalao. Ny valopy dia tokony hosokafana raha tsy eo ilay mpilalao tokony hamaly ny hetsika miafina.
Afa-tsy ireo tranga voalaza ao amin'ny lahatsoratra 5, 6.9 ary 9.6, dia very ilay mpilalao ho an'ny mpilalao manana firaketana miafina hetsika
tsy mazava na
diso, ka tsy azo atao ny mametraka ny tena dikany, na
Tsy ara-dalàna izany.
Raha rehefa manomboka indray ny lalao
eo ny mpilalao hamaly ny hetsika miafina, misokatra ny valopy, natao an-tsokosoko ny hetsika miafina ary napetrany teo amin'ny famantaranandrony.
ny mpilalao tokony hamaly ny hetsika miafina dia tsy eo, ny famantaranandrony dia tokony ho eo. Rehefa tonga dia afaka mampiato ny famantaranandrony ilay mpilalao ary miantso ny mpitsara. Misokatra ny valopy ary atao amin'ny solaitrabe ny hetsika miafina. Manomboka ny famantaranandronao avy eo.
Tsy eo ilay mpilalao nanao hetsika miafina, manan-jo hamaly amin'ny takelaka misy azy ny mpanohitra azy, manisy tombo-kase ny valiny amin'ny valopy vaovao, ajanony ny famantaranandrony ary atombohy ny mpifanandrina, fa tsy mamaly amin'ny fomba mahazatra . Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy tazomin'ny mpitsara ny valopy vaovao ary hosokafana aorian'ny fahatongavan'ilay mpanohitra.
7. Ny mpilalao dia tsy maintsy resy ny lalao raha tonga tara eny amin'ny solaitrabe mihoatra ny adiny iray izy amin'ny famerenanana ny lalao nahemotra (raha tsy faritan'ny fitsipiky ny fifaninanana na manapa-kevitra ny mpitsara raha tsy izany)
Na izany aza, raha ilay mpilalao nanisy tombo-kase ny hetsika miafina no mpilalao tara, mifarana ny lalao raha tsy izany:
ny mpilalao tsy eo no mpandresy noho ny fihetsika nataony miafina namono ny mpanohitra, na
ilay mpilalao tsy teo dia namoaka kisarisary satria ny fandrosoany dia 'rendrika' ny mpanjaka mpanohitra, na ny toerana voalaza ao amin'ny Andininy 9.6 niafara tamin'ny solaitrabe, na
Ilay mpilalao nanatrika ny solaitrabe dia resy tamin'ny lalao mifanaraka amin'ny Article 6.9.
Raha nanjavona ny valopy misy ny hetsika miafina, ny lalao dia tokony haverina amin'ny toerany amin'ny fotoana fampiatoana ary miaraka amin'ireo fotoana amin'ny famataran'ora toy ny tamin'ny fotoana fanemorana. Raha tsy azo averina ny ora ampiasain'ny mpilalao dia tsy maintsy ahitsy arakaraka ny fahendren'ny mpitsara ny famantaranandro. Ilay mpilalao nanisy tombo-kase ny hetsika miafina dia manatanteraka ny hetsika izay milaza fa izy no "tsiambaratelo" eny amin'ny solaitrabe.
Raha tsy azo atao ny mamerina ny toerany dia nofoanana ny lalao ary tsy maintsy lalaovina lalao vaovao.
Raha, rehefa manomboka indray ny lalao, ny fotoana nampiasaina dia tsy naseho diso tamin'ny iray amin'ireo famantaranandro ary raha misy iray amin'ireo mpilalao manasongadina azy alohan'ny hanaovana ny hetsika voalohany dia tokony ahitsy ny lesoka. Raha tsy tsikaritra ny lesoka dia tsy maintsy mitohy ny lalao raha tsy misy fanitsiana, raha tsy tsapan'ny mpitsara fa tena matotra ny vokany.
Ny faharetan'ny fotoam-pilalaovana mihantona tsirairay dia ho fehezin'ny famantaran'ny mpitsara. Ny ora fanombohana sy ny fiafarana dia tsy maintsy ambara mialoha.